Banyere Anyị - Tianjin Wodon Wear Resistant Material Co., Ltd.
Tianjin Wodon Wear Resistant Material Co., Ltd, bụ ụlọ ọrụ nwere onwe, nke dị na Tianjin, obodo ọdụ ụgbọ mmiri dị na ugwu China.
Wodon bụ otu n'ime ndị nrụpụta ngwaahịa ngwaahịa na -eguzogide abras. Ngwaahịa ya bụ isi gụnyere: mkpuchi chromium carbide (CCO) na -eyi efere, ịgbanye wired siri ike, na -eyi akwa. Enwere ndị ọrụ karịrị 300 na Wodon, gụnyere ndị injinia R&D 30 nwere ahụmịhe. Ka ọ dị ugbu a, Wodon na -ejikwa ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị prọfesọ na ụlọ ọrụ na -eguzogide ọgwụ dị ka onye na -ahụ maka ọrụ aka ụlọ ọrụ iji hụ na ike teknụzụ siri ike na ike mmepụta.
Anyị raara onwe anyị nye ịnye ngwọta dị mma na ọnụ ahịa dị ọnụ ala nke na-emezu ihe ndị ahịa chọrọ.
Site na usoro patent na -akwado, Wodon ika chromium carbide overlay clad plates abụrụla onye nnọchi anya nke akwa dị elu, amaara nke ọma maka nhichapụ ya dị elu na nguzogide mmetụta. A na -emepụta ha n'okpuru oke njikwa na -achịkwa nke ọma n'ime sistemụ njikwa mma.
● 68 na -eyi ahịrị mmepụta efere (ihe karịrị ọkụ ọkụ iri iri)
5 ahịrị mmepụta eriri waya
● 8 na -edobe igwe ihe nkedo nke CNC
7 setịpụrụ igwe na -ekwe multifunctional ekwe
Ic Vickers hardness tester/ Laptọọpụ Rockwell hardness tester/ obere ultrasonic hardness tester
Spectro Spectrometer/obere ihe nlegharị anya
ASTM G65 roba wheel akọrọ ájá abrasion na -eguzogide nyocha
Mic Microsurgical micro structure microscope
Beijing Hanxiang Industry & Trade Co., Ltd tọrọ ntọala
Ahịrị abụọ na -emepụta eriri waya na -agbanwe agbanwe na Fangshan Dist, Beijing.
Iji gbasaa ikike mmepụta, anyị guzobere Beijing Hanbo Welding Consumables Co., Ltd.
E tinyere ahịrị mmepụta asatọ nke bimetallic clad clad n'ime mmepụta
Anyị banyere imekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ nyocha ụlọ nyocha nke mahadum ụlọ ọrụ Beijing, State Gride Beijing Power Construction Research Institute na Iron and Steel Research Institute.
Tianjin Wodon eyi eguzogide ọgwụ Ihe Co., Ltd e tọrọ ntọala na -amụba efere mmepụta ike. Anyị guzobere ahịrị mmepụta akwa 20 na ahịrị mmepụta waya abụọ.
Anyị guzobere ngalaba azụmaahịa mba ofesi. A na -ebupu ngwaahịa n'ọtụtụ mba.
Ntughari kwa afọ ruru RMB 9300 0000.00
Ejikọtara ụlọ ọrụ Tianjin Wodon dị ka ebe nrụpụta ihe anyị bụ isi, na -emepụta efere na -eguzogide ọgwụ siri ike, wired na -agbanwe agbanwe wee banye n'ahịa mba ofesi. Na ọkara mbụ nke 2016, ntinye ngwaahịa anyị ezughi oke maka ahịa. Iji gbasaa ikike mmepụta, anyị tinyere ego na iri nde RMB ma guzobe mpaghara ụlọ ọrụ ọzọ. Ejila ikike mmepụta ihe mee ihe okpukpu atọ. Ntughari kwa afọ nke 2016 rutere RMB107000000.00
Iji jeere ndị ahịa anyị ozi nke ọma, etinyere ọfịs nke abụọ na Changsha City, Hunan. Ntughari kwa afọ nke 2017 ruru CNY 145,000,000.00 gụnyere ọnụ ahịa ahịa mbupụ CNY 13,030,000.00.
E hiwere Hunan Wodon New Material Co., Ltd iji melite ikike mmepụta.
Ntughari kwa afọ nke 2018 ruru CNY 169,000,000.00, gụnyere ọnụ ahịa ahịa mbupụ CNY 23,350,000.00.
Hebei Wodon New Material Co., Ltd hiwere iji melite ikike mmepụta.
Ntughari kwa afọ nke 2017 ruru CNY 200,220,000.00, gụnyere ọnụ ahịa ahịa mbupụ CNY 48,700,000.00.